नेकपाको सदस्यता : एनआरएनले नपाउने; कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकको पनि खोसिने ! — Newskoseli
नेकपाको सदस्यता : एनआरएनले नपाउने; कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकको पनि खोसिने !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बुधबार पार्टीको नियमावली पारित गरेसँगै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई नेकपाको सदस्य हुने बाटो बन्द भएको छ । नेकपाको नियमावलीमा नेपाली नागरिक मात्र सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
तर, नागरिकता ऐनले विदेशी नागरिकता लिएका नेपालीको नागरिकता स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्था खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट परे पनि सर्वोच्चले खारेज गरिदिएकाले एनआरएनलाई नेकपाको सदस्य हुने बाटो बन्द भएको जानकारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन गठित कार्यदलका सदस्य खिमलाल देवकोटाले दिए ।
‘नियमावलीमा नेपालको कानुनअनुसार नेपाली नागरिक मात्र पार्टीको सदस्य हुने व्यवस्था हामीले गरेका छौं, नागरिकता ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार विदेशी नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता स्वतः खारेज हुन्छ, त्यसैले अब एनआरएन नेकपाको सदस्य हुन पाउँदैनन्’– देवकोटाले भने । नियमावलीमा सिधै एनआरएन पार्टी सदस्य हुन नपाउने विषय नलेखे पनि नेपाली नागरिक मात्र पार्टी सदस्य हुने भन्ने विषयले एनआरएनलाई सदस्य हुनबाट रोक लगाएको देवकोटाको भनाइ छ ।
मंगलबार बसेको सचिवालय बैठकले नियमावली टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि प्रारम्भिक छलफल गरेपछि बुधबार बिहान बसेको बैठकले नियमावली पारित गरेको हो । नियमावली परिमार्जनका लागि नेकपाले नेताहरू वामदेव गौतम, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । नियमावलीलाई नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले अन्तिम रूप दिएपछि स्थायी समिति सदस्यले त्यसलाई हेर्न र सुझाव दिन पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसपछि नेकपाले नियमावली परिमार्जनका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।
नेकपाको नियमावलीलाई महासचिव विष्णु पौडेलसहित स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसाल तथा देव गुरुङ एवं केन्द्रीय सदस्य खिमलाल देवकोटाले अन्तिम रूप दिएका थिए । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा कुनै विवाद नभएकाले छलफलपछि सर्वसम्मत तरिकाले नियमावली पारित गरिएको नेकपाले जनाएको छ ।
नेकपाले पार्टीको नाम, सिद्वान्त, मार्गदर्शक सिद्वान्त, अध्यक्ष, केन्द्रीय सचिवालय, वरिष्ट नेता, महासचिव, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति र चुनाव चिन्हलगायतका विषयलाई पहिले नै टुंगाइसकेको खबर वसन्त खड्काको बाइलाइनमा बिहीबारको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ ।